::ဓ မ္မ စ ကား နေ့ တိုင်း ကြားက၊ စိတ် ထား ဖွေး လက် သိ ဥာဏ် ထက် ၏::: 2007
သေခါနီးမှာ(လောဘ)မှတ်လျှင် ပြိတ္တာ၊ အသူရကာယ်ဖြစ်။
သေခါနီးမှာ(အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ)မှတ်လျှင် ဗြဟ္မာဘုံ ၂၀ မှာဖြစ်။
သေခါနီးမှာ(ဗုဒ္ဓေါ၊ ဓမ္မော ၊ သံဃော)မှတ်လျှင် လူနတ် ၇ ဘုံမှာဖြစ်။
သေခါနီးမှာ(အကြောင်းကံ)သတ်လျှင် နိဗ္ဗာန်ဝင် အစဉ်ရပ်သွားမည်။
မှတ်ချက်။ ။မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုကနေ အမှတ်တမဲ့ ဖတ်မိလိုက်တာလေးကို သူငယ်ချင်းအားလုံးအတွက် ပိုစ့်တစ်ခုရိုက်တင်ပေးလိုက်တာပါ
Posted by ယူဆဂိ at Thursday, October 25, 20070comment
ဘာပို့စ်အသစ်မှ တင်မထားပေမယ့် ဆီဘောက်မှာ ၀င်အော်သွားကြတဲ့သူငယ်ချင်းများကို
အသစ်ကလည်းရေးချင်ပါတယ်။ စိတ်နောက်ကို လူ နဲ့ ကွန်ပျူတာက ပါမလာလို့ပါ။
ပဋ္ဌာန်း ၂၄ ပစ္စည်း ဆုတောင်း လည်းဆက်ရေးပေးမှာပါ။
ကားလည်းပျက်မသွားသေးပါဘူး။ ဆက်မောင်းနေတုန်းပါ။ ဟတ် ဟတ်။
သမအောင်လည်းရောမမွှေတော့ပါဘူး။ (အချိုမှုန့် ကုန်နေလို့ပါ) ဒါနဲ့ ခွေးစာလည်းမကျွေးဖြစ်လိုက်ဘူးလေ။
အလုပ်တွေရှုပ်နေတယ်လို့ ဆင်ခြေ ဆင်လက် ဆင်ခြေထောက် ဆင်ခေါင်း တွေပေးလိုက်ပါရစေ။(စွပ်ပြုတ်လုပ်စားဖို့ -- တစ်ယောက်နဲနဲစီ- ခွဲယူကြနော်. မလုကြနဲ့။ ဟတ် ဟတ်)
အားလုံးကို ပျော်စေချင်လို့ နောက်တာပါ။
နေကောင်းတာကတော့ ဒေါင်ဒေါင်မည် သူငယ်ချင်းတို့ရေ။
စာကို ဒီနေရာမှာရပ်ခွင့်ပြုပါဦး။ နောက်မှ စာထပ်ရေး အဲ..ပို့စ်အသစ်တင်လိုက်ပါမယ်။
ကဲ...သူငယ်ချင်းတို့...ဆဂိ ပို့စ်အသစ်တွေထပ်တင်ဖို့ စိုင်းပြင်းနေပါတယ်။ မှန်မှန်တော့လာလည်ကြပါလို့။
PS: ပေါရက်လိုက်တာလို့ လည်းမှတ်ချက်ပေးမသွားကြနဲ့အုံး။
Posted by ယူဆဂိ at Tuesday, October 23, 20072comment
"MRT"-(ဘူတာရုံ လို့ ဆိုပါတော့)
ez.link ဆိုတဲ့ ကဒ်လေးဖြတ်ပြီး အထဲကိုဝင်ရတယ်
Posted by ယူဆဂိ at Tuesday, October 09, 20070comment
S'pore River Side
မနက်စောစော နဲ့ ညနေခင်းမှာ တော်တော်ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပါ ဓါတ်ပုံရိုက်ရတာကို အရမ်းဝါသနာ ပါတဲ့အတွက် မြင်မြင်သမျှ အကုန်ရိုက်ပါတယ်။
ရိုက်ထားသမျှထဲက ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေ တင်လိုက်တာပါ။
ဒီပိုစ့်ကို စရေးတဲ့အချိန်ကတော့ ည ၁၂ နာရီတိတိပါ။ အိပ်နေရာကထလာပြီး ဆက်အိပ်ချင်စိတ်ကို မရှိတော့တဲ့အတွက် ကွန်ပျူတာဖွင့်ပြီး ဘလောက်တွေဖတ်ရင်းနဲ့ စိတ်ထဲရှိတာလေးကောက်ရေးလိုက်မိတယ်...
ကျေးဇူးတရား ဆိုတာ လူတိုင်းမကင်းကြဘူးပြောရင်လက်ခံကြပါ့မလားတော့မသိဘူး..
ဆဂိ ဘ၀မှာတော့ ကျေးဇူးရှင်တွေ.... ကျေးဇူးရှင်တွေ...များမှများ.. အရင်ဆုံး မိဘနှစ်ပါး။ နောက်တော့ ဆရာသမား...နောက်တော့.....နောက်တော့...
ကိုယ့်ကို တစ်ခုခုလေးများကူညီပေးလိုက်ရင် လူတွေပြောတတ်ကြတယ်. "ကျေးဇူးတင်ပါတယ်" တဲ့။
သင့်အပေါ် ကျေးဇူးတင်သွားပါပြီလို့ နှုတ်နဲ့စာချုပ်ချုပ်လိုက်သလို ခံစားမိကြသလား၊
ဒါမှမဟုတ် လောကွတ်ချော် သမန်ကာလျှံကာ ၀တ္တရားအရ အကျင့်ပါနေလို့ အလွယ်ပြောလိုက်ကြတာလား။
အင်...အခြားလူတွေ ဘယ်လိုတွေးတောတယ်ကိုပြောချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်အကြောင်းပါ..
ဒီနေ့ ဒီအချိန်ထိ- ကိုယ်က ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လို့ပြောခဲ့တာ နဲ့ ကိုယ့်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပြောသွားကြတာ ဘယ်ဟာကပိုများနေမလဲ တွေးမိတာပါ။
ဒီအတွေးတွေ ဒီညမှ အကြီးအကျယ်တွေးနေတာပါ။
တကယ်တော့ ကျေးဇူးတရားဆိုတာကို တန်ဖိုးထားမိရင်၊ ကျေးဇူးတရားကို တကယ်နားလည်ရင်...
ကျေးဇူးရှင်အပေါ် ကျေးဇူးမတုံ့ပြန်နိုင်ခင်မှာ နားလည်ပေးရမှုတွေ ၊ သည်းခံမှုတွေ စတဲ့ အရင်းနှီးတွေ မြှုတ်နှံရတယ်လို့ခံစားရပါတယ်...
ဆဂိ တစ်ယောက် ဘာတွေပြောနေမှန်း နားမလည်.. နားရှုပ်သွားရင်တော့ ဆောရီးပါ။ ဒီအထိ ဖတ်ပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
ဟော- တင်ပြန်ပြီ ကျေးဇူး...အလကားနေရင်းကို အဲ့ဒီလို ကျေးဇူးသေးသေးလေးတွေ လူတွေအပေါ် တင်ခဲ့တာ များလှပေါ့..
အော်- ငါဒီကျေးဇူးတွေ ဒီတစ်ဘ၀တည်းနဲ့ဘယ်လိုများ ဆပ်လို့ပြီးပါ့မလဲ....စဉ်းစားကြည့်တာပါ
ဆဂိ၏ ကျေးဇူးရှင်အပေါင်း အပထားလို့..လတ်တလော လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကျေးဇူးရှင်တို့ရေ...
ကျေးဇူးတရားရဲ့ အောက်မှာ Uဆဂိ တစ်ယောက် ပြားပြားဝပ်နေပါရော့လား...
ဒါကို သိအောင်လည်းပြောပြမနေတော့ပါဘူး။ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပြီး ကျေးဇူးဆပ်နိုင်တဲ့နေ့ အမြန်ရောက်ရပါလို၏ လို့ဆုတောင်းနေပါတယ်
မှတ်ချက်။ ။ ကျေးဇူးတရားတွေအောက် ဆဂိ လိုများ ပြားပြားဝပ်နေကြပါသလား။ ကိုယ့်ဘလောက်လေးပေါ်မှာ ကိုယ်ခံစားရသမျှတွေဒီလိုရေးခွင့်ရတဲ့အတွက် ဘယ်သူ့ကိုများကျေးဇူးတင်ရပါ့.....
Posted by ယူဆဂိ at Monday, October 08, 20072comment
၁။ ဟေတု ပစ္စယော
အကုသိုလ်ကင်း၍ ကုသိုလ်နှင့် ယှဉ်တွဲရပါစေသား။
၂။ အာရမ္မဏ ပစ္စယော
မျက်စိနှင့်နားသည် နိဗ္ဗာန်သို့ မျက်မှောက်ပြုရပါစေသား။
၃။ အဓိပတိ ပစ္စယော
ရုပ် နာမ် နှစ်ပါးကို စောင့်ရှောက် ထိန်းသိမ်းရပါစေသား။
၄။ အနန္တ ပစ္စယော
များလှစွာသော ကုသိုလ်ရေးများကို မျက်မှောက်ပြုရပါစေသား။
၅။ သမနနရ္တ ပစ္စယော
ရုပ် နှင့် နာမ် အတူရှိသော တရားတို့ကို မျက်မှောက်ပြုရပါစေသား။
၆။ သဟဇာတ ပစ္စယော
ရုပ် - ရုပ်ခြင်း၊ နာမ်- နာမ်ခြင်း ထင်ရှားစွာသိရပါစေသား။
၇။ အညမည ပစ္စယော
ရုပ်မှနာမ်သို့ နာမ်မှရုပ်သို့ ပြောင်းလဲ၍ သိရပါစေသား။
၈။ နိဿယ ပစ္စယော
ရုပ်နာမ်နှစ်ပါးတို့၏ တည်ရာကို သိရပါစေသား။
၉။ ဥပနိဿယ ပစ္စယော
၁၀။ ပုရေဇာတ ပစ္စယော
ရှေ့ကဖြစ်သော အကုသိုလ်ကိုပယ်၍ ကုသိုလ်ကို မျက်မှောက်ပြုရပါစေသား။
(သိပြီးသူများ ထပ်မံသတိရပွားများစေရန် နှင့် မသိသေးသူများ သိရစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်)
Posted by ယူဆဂိ at Thursday, October 04, 20070comment
"Today" will become "Yesterday".
"Yesterday" was became from "Today".
Tomorrow I will busy
Posted by ယူဆဂိ at Monday, September 17, 20073comment
မအားလို့ပိုစ်အသစ်မတင်ဖြစ်ပေမယ့် သူငယ်ချင်းအားလုံးကို သတိရပါကြောင်း။
လာလည်ကြသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆဂိ အားတာနဲ့ အားလုံးစီကိုလာလည်ပါမယ်
Posted by ယူဆဂိ at Saturday, September 15, 20070comment
Posted by ယူဆဂိ at Wednesday, September 05, 2007 11 comment
Posted by ယူဆဂိ at Monday, September 03, 20072comment
စက်တင်ဘာလ ရဲ့  ပထမရက် မှာ ပျော်စရာ Quiz လေးတစ်ခုမျှဝေလိုက်ပါတယ်..
Fun Quiz For All
Your Great Solution,
ကဲ ဘာပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲ၊ ဖြေကြည့်လိုက်ပါ။ နောက်မှအဖြေပြောပြမယ်နော်။ အားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေ။
Posted by ယူဆဂိ at Saturday, September 01, 2007 16 comment
Posted by ယူဆဂိ at Monday, July 23, 20070comment
မန္တလေးတိုင်း ပြင်ဦးလွင် ခရိုင်၊ မတ္တရာမြို့ နယ်၊ အုတ်တိုက်ကျေးရွာ ၊
မတ္တရာမြို့ နယ် ဥက္ကဌမှကြီးမှူး၍ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဣန၀ံသ သည်
အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ
သူငယ်တန်းမှ (၇)တန်း ထိ ကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် တိုးချဲ့၍
ယခုအခါ (၈)တန်း (၉)တန်း (၁၀)တန်းများဆက်လက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် အတွက်
ထောက်ပံ့လှူဒါန်းငွေများလိုအပ်နေပါ၍ ပရဟိတ လုပ်ငန်းစိတ်ဝင်စားသူများ
လှူဒါန်းလိုသူများ အနေဖြင့် ...
မတ္တရာမြို့ နယ်၊ အုတ်တိုက်ကျေးရွာ
မှတ်ချက်။ ။ ပရဟိတစိတ်ဝင်စားပြီး မသိသေးသော ဘလောက်မိတ်ဆွေများ အား
သိစေရန်အလို့ဌာ သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါသည်။ ရွှေမန်းမှ မိတ်ဆွေလေးများလည်း
Posted by ယူဆဂိ at Friday, July 13, 20070comment
Labels: Wish for all, စေတနာ သုံးတန်
A.Siturei simasu. / Osakini siturei simasu.(မရိုမသေဖြစ်သွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါ)
A. Onegai simasu.(ဆောင်ရွက်ပေးပါ/လုပ်ပေးပါ)
Tyotto onegai simasu.(တဆိတ်လောက် လုပ်ပေးပါလား)
Kore onegai simasu.
A. Moo owarimasita ka?(ပြီးပြီလား)
B. Hai, Moo owarimasita.
Iie, mada owarimasen./ Iie, mada desu.
A. Moo wakari masita ka. (နားလည်ပြီလား)
B. Hai, moo wakarimasita.
Iie, mada wakarimasen./ Iie, mada desu.
A.Ohisasiburi desu ne.(မတွေ့တာကြာပြီနော်)
Ogenki desu ka.(နေကောင်းလား)
B.Hai, okagesamade. genki desu.(ဟုတ်ကဲ့.. သင်ပို့သတဲ့မေတာကြောင့်နေကောင်းပါတယ်)
B. Gotisoo sama desita. (အခုလိုကျွေးမွေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်)
Posted by ယူဆဂိ at Tuesday, July 03, 20070comment